टेलिकमद्वारा सिन्धुपाल्चोकका विकट ग्रामीण क्षेत्रमा जीएसएम मोवाइल सेवा संचालन
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले कम्पनीको मोबाइल सेवा नपुगेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विभिन्न विकट ग्रामीण क्षेत्रमा जीएसएम मोवाइल सेवा उपलब्ध गराउन आरम्भ गरेको छ ।
कम्पनीले २०७४ फागुन २९ गते देखि ती विभिन्न क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विकट ग्रामीण क्षेत्रहरु मनिसौरा, गुमथाङ, थागम, तातोपानी र लिस्तीका अधिकांश स्थानमा जीएसएम मोबाइल सेवा उपलब्ध गराएको छ ।
अव ती क्षेत्रहरुमा जीएसएम टुजी र थ्रिजी मोबाइल सेवा उपभोग गर्न सकिने भएको छ ।
जिल्लाको बाह्रविसे नगरपालिका वडा नम्बर ६ को विकट मानिने गति मान्द्रामा टावर स्थापना गरी ती क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराइएको हो । गति मान्द्रा भोटेकोशीको बन्जी जम्पिङ रहेको स्थानबाट करिब १५ किलोमिटरको दुरीमा अवस्थित छ ।
अब यी स्थानमा मोबाइलमार्फत कुराकानी गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनुको साथै डाटा चलाउन समेत सकिने छ । ती क्षेत्रका करिब ४ हजार सेवाग्राही दूरसञ्चार सुविधाबाट लाभान्वित हुने भएका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमले संविधान दिवस यसरी मनायो
काठमाडौं। संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको नयाँ संविधानले तीनवर्षको गौरवमय सफलता प्राप्त गरिसकेको छ । वि.सं. २०७२ सालमा नेपालीहरुद्वारा नेपालीहरुका लागि लेखिएको नयाँ संविधानले आम नेपालीहरुका भावना एवं मर्महरुलाई आत्मसाथ गर्दै आएको छ
स्मार्ट टेलिकमद्वारा सिमकार्ड खरिदमा थप सुविधा
काठमाडौं । नेपालको तेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनी स्मार्टले सिमकार्डको खरिदमा थप रु. ४० प्रदान गरेको छ । स्मार्टको सिमकार्ड खरिदमा प्राप्त हुने विद्यमान सुविधाको साथथप रकम प्राप्त गर्न सकिने छ
टेलिकमको मोबाइलमा समस्या, देशभरका ग्राहक प्रभावित
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमलको देशभरका मोबाइल फोनमा मंगलबार बिहानैदेखि समस्या अाएको छ । यसले गर्दा लाखौँ ग्राहक प्रभावित भएका छन् । टेलिकमले प्राविधिक कारणले मोबाइल फोनमा समस्या आएको बताएको छ । तर
बारा र पर्सामा महिना दिनदेखि नेपाल टेलिकमको नेटवर्कले काम गरेन
बारा । नेपाल टेलिकमअन्तर्गत जी.एस.एम.का प्रिपेड र पोष्टपेडको नेटवर्कमा समस्या आएपछि बारा र पर्साका सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका जनताहरु नेपाल टेलिकमअन्तर्गत जी.एस.एम.का प्रिपेड